काठमाडौं- बढ्दो बालबलिका तथा चेलिवेटी बेचबिखन न्यूनिकरण गर्न बेचबिखनमा संलग्न दलालको अनुहार पहिचान गर्ने एप्स सुरुवात गरिएको छ । शुक्रबार माइती नेपालले ‘खोजी’ एप्सको सुरुवात गरेको छ । वर्षेनी ५ हजारदेखि १० हजार महिला तथा बालबालिका नेपालबाट बेचबिखनमा पर्ने समस्या रोक्न यस एप्सले सहयोग गर्ने विश्वास माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाको छ । कोइरालाले शुक्रबार खोजी एप्सबारे जानकारी गराउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा माइती नेपालका देशभरिका १४ स्थानमा रहेको ट्रान्जिट होमबाट एप्स कार्यन्वयनमा ल्याइसकेको बताइन् । ‘जोखिममा परेका चेलिबेटी तथा बालबालिकाहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य गर्न र ...
पुस ७ - पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी हुने अपराधका घटना बढ्दै गएका छन् । चितवन जिल्लामा गत वर्ष दुईवटा मुद्दा दर्ता भएकामा यस वर्षको चार महिनामा पाँचवटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाका अनुसार अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमका घटना घटाउने गरिएको छ । पछिल्लो समय आएर फेसबुक, ट्विटर, इमो, भाइबर लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको हो । सामान्य निवेदन मात्र कार्यालयमा दैनिक दुईदेखि तीनवटा आउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । सामाजिक सञ्जालका ...
विश्वको सवैभन्दा सानो क्रिस्मस कार्ड
पुस ५ –बेलायतका वैज्ञानिकहरुले विश्वको सवैभन्दा सानो क्रिस्मस कार्ड बनाएका छन् र यो कार्ड यति सानो छ की एउटा पोष्ट कार्डमा यस्ता २०० मिलियन कार्ड अटाउन सक्छन् । नेशनल फिजिकल ल्याबोरेटरी ( एनपिएल ) ले बनाएको उक्त कार्डलाई युकेको नेशनल मेजरमेन्ट स्ट्यान्डर्डस् ल्याबोरेटरीले १५ x २० माइक्रोमिटर भएको बताएको छ । एक माइक्रोमिटर एक मिटरको एक मिलियनौँ अंश हुन्छ । यो कार्ड सिलिकन नाइट्राइडमा प्लाटिनमको लेप लगाएर बनाइएको छ आयोन बिमको केन्द्रिकरणबाट यसलाई देखाइएको थियो । यसको बाहिरी सतहमा स्नोम्यानमा सिजन्स ग्रिटिंस लेखिएको छ भने भित्र ...
पुस १ - गत महिना ट्विटरले एक सय ४० ‘क्यारेक्टर’ सीमालाई हटाएर दोब्बर बनायो । सुरुमा केही सीमित प्रयोगकर्ताबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको दुई सय ८० ‘क्यारेक्टर’को ट्विट सीमा नोभेम्बरको पहिलो सातादेखि सबैले प्रयोग गर्न पाए । दुई सय ८० ‘क्यारेक्टर’ बन्ने चर्चा भएसँगै ट्विटरको आलोचना भयो । धेरैले यसलाई गिज्याए । आलोचना ट्विटरको लम्बाइमा मात्र सीमित रहेन, ट्विटरमा भइरहेका दुव्र्यवहारलाई घटाउन कदम नचालेकामा पनि आलोचना भयो । ट्विटरले आवश्यक कदम नचाल्ने तर अन्य कुरामा ध्यान दिने भन्दै धेरैले आलोचना गरेका थिए । प्रयोगकर्ताले दुई सय ८० ...
पुस १ –स्मार्टफोन हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग भइसकेको छ । हामीले स्मार्टफोन प्रयोगबारे केही त्यस्ता बानी विकास गरेका छौँ, जसको खास अर्थ छैन । र, त्यसले केही फाइदा पनि गर्दैन । १) ब्याकग्राउन्ड एपहरू बन्द गर्ने ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेका एपहरू बन्द गर्न सुरु गर्ने व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमै लाज मान्नुपर्ने हो, किनभने यसको कुनै अर्थ छैन । कम्प्युटर वा ल्यापटपमा रिफ्रेस क्लिक गरिरहेजस्तो ब्याकग्राउन्ड एपहरू बन्द गर्ने धेरैको बानी हुन्छ । ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेका एपहरूले ¥याम चलाइरहेको त हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड एप बन्द गर्दैमा त्यो समाप्त हुने होइन । ब्याकग्राउन्ड ...
मंसिर २९ -फेसबुकको सुरुदेखिकै फिचर हो– पोक । पोक केका लागि प्रयोग गर्ने कुनै नियम छैन । फेसबुक प्रयोगकर्ताले अन्य प्रयोगकर्तालाई पोक गर्ने चलन छ तर पछिल्लो समय यसको प्रचलन घट्दै छ । फेसबुकले अब भने पोकको फिचर परिवर्तन गरेर अन्य अप्सन थप्ने भएको छ । जहाँ पोक गर्दा हाइफाइभ, हाई, वेबजस्ता फिचरहरू रहनेछन् । यसको नाम भने पोकको सट्टा ‘हेल्लो’ हुनेछ । फेसबुकले बेलायत र थाइल्यान्डका प्रयोगकर्ताबीच यसको प्रयोग गरिरहेको छ । मोबाइल एपमा हरेक व्यक्तिको प्रोफाइलमा हेल्लो बटन रहनेछ भने वेब भर्सनमा पनि सोहीअनुसारको डिजाइन ...
मंसिर २९ -गीत पहिचान गर्ने एप शाजमलाई एप्पलले किनेको छ । दुवै कम्पनीले यसको पुष्टि गरेका छन् तर रकम भने खुलाइएको छैन । शाजम यसअघिदेखि नै एप्पलको सिरिजसँग जोडिएको छ । शाजम एप प्रयोगकर्तामाझ गीत पहिचान गर्ने एपका रूपमा चर्चित छ । जस्तो, कुनै पार्टी वा कतै कुनै गीत सुनियो तर उक्त गीत कुन हो ? कसको हो ? थाहा छैन भने शाजमले उक्त गीतको ट्रयाकको भरमा गीतको पहिचान गर्न सक्छ । एप्पलले शाजमलाई आफ्नो म्युजिक स्ट्रिमिङ सर्भिस एप्पल म्युजिकसँग जोड्नेछ । पछिल्लो समय एप्पल म्युजिकको ...
मंसिर २९ -ह्वाट्सएपले ग्रुप च्याटमा पनि व्यक्तिगत रूपमा च्याट मिल्ने फिचरसहितको नयाँ अपडेट ल्याउने भएको छ । यसले प्रयोगकर्तालाई ग्रुप च्याटमा कुराकानी गरिरहेका बखत कुनै व्यक्तिसँग छुट्टै च्याट गर्ने सुविधासमेत दिनेछ । साथै, ह्वाट्सएपले भिडियो कल गरिरहँदासमेत म्यासेजमा कुरा गर्न मिल्ने सुविधा पनि थप्दैछ । एन्ड्रोइडका लागि नयाँ आउने अपडेटमा च्याटमा कुनै आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरे तत्काल रिपोर्ट गर्न मिल्ने सुविधा पनि हुने विबेटाइन्फोले जनाएको छ । विबेटाइन्फो ट्वीटर ह्यान्डल हो जसले ह्वाट्सएपमा आउने अपडेटको पूर्वजानकारी दिने गर्छ । source; Ekantipurnews.com
कान्तिपुर टेलिभिजन आजदेखि एचडीमा
मंसिर २८ -कान्तिपुर टेलिभिजन बिहीबारदेखि उच्च दृष्टिकोणको नयाँ स्वरूपसहित हाइडेफिनेसन (एचडी) प्रविधिमार्फत प्रसारण हुने भएको छ । पछिल्लो समय विकास भएका प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै गहन विषयवस्तु अझ स्पष्ट दृश्यमार्फत दर्शकमाझ पुर्‍याउने लक्ष्यसाथ स्तरोन्नति गरिएको टेलिभिजनले जनाएको छ । ‘सूचना, शिक्षा, मनोरन्जनमार्फत नागरिकलाई सुसूचित गर्ने सिलसिलालाई थप परिष्कृत र परिमार्जन गर्दै एचडी प्रविधि र नयाँ स्वरूपसहित प्रसारणमा लगिएको हो,’ कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क प्रालिद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले नेपाली टेलिभिजन इतिहासमै नयाँ आयाम स्थापित गर्न सफल हुने विश्वास छ ।’ कान्तिपुर टेलिभिजन २०६० असार २९ ...
मोबाइल टावर निर्माणमा विदेशी कम्पनीको रुचि
काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत पूर्वाधार सेवाको लाइसेन्स लिन गरेको बोलपत्र आह्वानमा ठूलो मात्रामा विदेशी कम्पनीले रुचि देखाएका छन्। प्राधिकरणले पूर्वाधार साझेदारी गराउन यही मंसिर ७ गते कानुन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्पनीबाट बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्र आह्वान भएसँगै एकीकृत पूर्वाधार सेवाको लाइसेन्स लिन अमेरिका, चीन, भारतलगायत विभिन्न देशका ठूला कम्पनीले आरएसए डकुमेन्ट खरिद गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले एउटै कम्पनीबाट सबै मोबाइल अपरेटरको सेवा विस्तार गर्न दुईवटा छुट्टै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको हो। यसमा अहिलेसम्म नेपालका केही कम्पनीका साथै अमेरिका, चीन, भारत, मलेसिया, ...
अब एनसेलको रिचार्ज अनलाइनबाट पनि
काठमाडौं–निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपालमै पहिलो पटक अनलाइन रिचार्ज सेवा सुरु गरेको छ । यो सेवा अन्तर्गत एनसेलका ग्राहकले भिसा, मास्टरकार्ड र युनियनपेको आफ्नो डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी जहाँ भएपनि प्रिपेड मोबाइल रिचार्ज तथा पोस्टपेड मोबाइलको बिल भुक्तानी गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । अनलाइन रिचार्ज सेवा मंङगलबारबाट सुरु भएको छ । एनसेलका अनुसार, डिजिटल सेवा मार्फत ग्राहक अनुभवलाई थप अभिवृद्घि गर्ने उद्देश्य स्वरुप यो सेवा ल्याइएको हो । एनसेलका ग्राहकले एनसेलको वेवसाइट payment.ncell.axiata.comमा गई डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिचार्ज छनोट गरी आवश्यक ...
मंसिर २६ -ओपोले एफफाइभ सिक्स जीबी रेड एडिसन नेपाली बजारमा ल्याएको छ । ओपो एफफाइभ सिक्स जीबी फेसनेबल रातो रङमा उपलब्ध हुनुका साथै यसमा अझ बढी सञ्चय क्षमता, ६ जीबी र्‍याम र ६४ जीबी रोमसहितको उत्कृष्ट प्रोसेसर जडान गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । फोनमा ६ इन्चको पूर्ण एचडी फुल स्क्रिन डिस्प्ले जडान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार एफफाइभ सिक्स जीबी रेड एडिसनको मूल्य ४४ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । केही दिनअघि मात्रै कम्पनीले एफफाइभ सिक्स जीबीको ब्ल्याक एडिसन ...
काठमाडौं : सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा ठूलो कमी आएको छ। टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कलमार्फत आम्दानीमा हुने गिरावटले टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा २५ प्रतिशतसम्म कमी आएको टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले जनाएका छन्। ओभर द टप (ओटीटी) अर्थात कुनै इन्टरनेट प्रोभाइडरअन्तर्गत रहेर प्रदान गर्ने एप भाइबर, स्काइप ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, आईएमओलगायत सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दानीमा गिरावट हुन थालेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए। उनका अनुसार ओटीटीले गर्दा टेलिकम क्षेत्रमात्र ...
मंसिर २५ - मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना नतिजा सार्वजनिक भएपछि पहिला, दोस्रो र तेस्रो स्थान हासिल गर्ने उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल ‘मुहारपुस्तक’ मार्फत मतदाता र शुभचिन्तकलाई आभार प्रकट गरिरहेका छन् । समयको बचत र स्वदेश तथा विदेशमा रहेकालाई एकैसाथ सम्बोधन हुने भएपछि पाल्पाका विजयी तथा पराजित दुबैथरीले फेसबुकबाट आफूलाई सहयोग गर्ने सबैलाई आभार तथा धन्यवाद प्रकट गरेका हुन् । मतदाता तथा शुभचिन्तकले विजयी उम्मेदवारलाई फेसबुकबाटै बधाई तथा शुभकामना दिने क्रम जारी छ । पराजय भोगेका उम्मेदवारले विजेतालाई सम्मानपूर्वक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्ने ...
मंसिर १९ – फेसबुकमा १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले एकाउन्ट बनाउन पाउँदैनन् । तर पनि धेरै बालबालिकाले फेसबुक र म्यासेन्जर चलाइरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई लक्षित गरी फेसबुकले च्याट एप्लिकेशन ल्याएको छ । फेसबुकले म्यासेन्चर किड नामको एप्लिकेशन ल्याएको हो, यसबाट १३ वर्ष वा त्यो भन्दा कम उमेरका बालबालिकाले च्याट गर्न, रमाइला भिडियो हेर्न, फोटो तथा स्टिकरहरु पठाउन सक्छन् । तर यसका लागि अभिभावकले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट बालबालिकाले साथीहरुलाई म्यासेज पठाउँदा पनि अभिभावकले स्वीकृत गरिदिनुपर्छ । यो एप्लिकेशनमा बालबालिकाले आफैले साथीहरुलाई च्याटमा जोड्न अथवा म्यासेज ...
काठमाडौं : टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम (एनटीसी), एनसेल र स्मार्टसेलबीच चलेको प्रतिस्पर्धाले भ्वाइस कल सेवा सस्तो बन्दै गएको छ। कम्पनीबीच ग्राहक आकर्षण गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव आम नागरिकमा परेको छ। यसबाट ग्राहकले न्युन शुल्कमा भ्वाइस कल सेवा उपभोग गर्न पाएका छन्। कम्पनीले ग्राहक आकर्षित गर्ने नाममा विभिन्न भ्वाइस कल प्याक ल्याएका छन्। कसैले ‘नाइट भ्वाइस प्याक', कसैले ‘माई फाइभ', त, कसैले ‘स्पेसल टक प्याक' योजना ल्याएका छन्। यस किसिमका विभिन्न भ्वाइस कल योजना कम्पनीले ग्राहकलाई प्रस्तुत गर्दा सबैभन्दा फाइदा ग्राहकलाई पुगेको दूरसञ्चार ...